တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအား ရှင်းလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း – PAPAWADY
တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအား ရှင်းလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း
Posted on August 9, 2017 August 9, 2017 by papawady
မအေးသောင်း ရှင်းပြီ။ မအေးသောင်း ဟာ သတင်းစာ မှာပါလာတဲ့ သူမ ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ခွင့်မပြုပဲ ယူသုံးနေတဲ့ အွန်လိုင်းရှော့ပင်း စာမျက်နှာတွေကို
တရားစွဲ ဆိုမယ်လို့ သတင်းစာ မှာ ပါလာခဲ့တဲ့သတင်းအား ပရိသတ်အချို့ က အမြင်မကြည်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ချက်ချင်းပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်
ကိုယ့်ပုံလေးတွေ သုံးတာ ရှဲတာ မကြိုက်ပဲနေပါ့မလားလို့။ အခါ တစ်သန်းလောက်တောင် ရှဲစေချင်တာလေ။ အေးသောင်းပုံလေးနဲ့ ကဗျာလေးတွေရေး စာလေးတွေရေး ဘယ်လောက် ကျေနပ်စရာကောင်းလိုက်လဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲ အေးသောင်းဆိုပြီးဖြစ်လာတာလေ။ အဲ့လို့သူက ကိုယ့်ပုံတွေကို မ share ဖို့ပြောပါ့မလားလို့ ။ ကိုယ်လဲ အဲ့လောက်တော့ မတုံးသေးပါဘူး ခိခိ။
ရှဲပါရှဲပါရှဲလေ ကြိုက်လေပါပဲ Online shop ?????
ဘယ် online shop မဆို ခွင့်တောင်းရင် အမြဲ ခွင့်ပြုခဲ့တာချည်းပဲ။ တခါမမငြင်းမိ။ ကိုယ့်ပုံပါစေချင်တာလေ
ပါချင်စိန်ပါ။ online shop လေးတွေလဲ သိကြမှာပါ နော့်။တခါမှလဲအပြစ်မမြင်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်လဲဈေးရောင်းနေသူပဲလေဟဲဟဲသိတာပေါ့။
ခက်တာကတချို့ညစ်ညစ်ပါတ်ပါတ်online shop တွေပေါ့။ သူတို့တွေကိုယ့်ပုံကိုဖိုတိုတွေရှော့ကြပြီး ကြော်ငြာကြတာ။ ဆေ့ထားတာတောင် ပြန်မရှဲ ရဲပု။ ရှက်လို့။ တချို့တွေလဲ မြင်ဖူးကြမှာပေါ့။အဲ့တော့ နားလည်မှုလေးတွေ မလွဲစေချင်။ချစ်ခြင်းကို မခွဲကြပါနဲ့။ရှဲ ရှဲပါလို့ (တရုတ်လိုပြောခြင်း မဟုတ်ပါရှဲ သာ ရှဲပါလို့ကဲ ၊ မအေးသောင်း က ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော် ။ ရှဲ သာရှဲပါတဲ့။ အားလုံးပဲ မအေးသောင်း ပုံလေးတွေ စိတ်ချလက်ချ ရှဲ လို့ ရတယ်နော်
မအေးသောငျး ရှငျးပွီ။ မအေးသောငျး ဟာ သတငျးစာ မှာပါလာတဲ့ သူမ ရဲ့ ဓာတျပုံတှကေို ခှငျ့မပွုပဲ ယူသုံးနတေဲ့ အှနျလိုငျးရှော့ပငျး စာမကျြနှာတှကေို
တရားစှဲ ဆိုမယျလို့ သတငျးစာ မှာ ပါလာခဲ့တဲ့သတငျးအား ပရိသတျအခြို့ က အမွငျမကွညျတာနဲ့ ပတျသတျပွီး ခကျြခငျြးပွနျလညျရှငျးလငျးခဲ့ပါတယျ
ကိုယျ့ပုံလေးတှေ သုံးတာ ရှဲတာ မကွိုကျပဲနပေါ့မလားလို့။ အခါ တဈသနျးလောကျတောငျ ရှဲစခေငျြတာလေ။ အေးသောငျးပုံလေးနဲ့ ကဗြာလေးတှရေေး စာလေးတှရေေး ဘယျလောကျ ကနြေပျစရာကောငျးလိုကျလဲ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ပဲ အေးသောငျးဆိုပွီးဖွဈလာတာလေ။ အဲ့လို့သူက ကိုယျ့ပုံတှကေို မ share ဖို့ပွောပါ့မလားလို့ ။ ကိုယျလဲ အဲ့လောကျတော့ မတုံးသေးပါဘူး ခိခိ။
ရှဲပါ ရှဲပါ ရှဲလေ ကွိုကျလပေါပဲ
Online shop ?????ဘယျ online shop မဆို ခှငျ့တောငျးရငျ အမွဲ ခှငျ့ပွုခဲ့တာ ခညျြးပဲ။ တခါမ မငွငျးမိ။ ကိုယျ့ပုံ ပါစခေငျြတာလေ
ပါခငျြစိနျပါ။ online shop လေးတှလေဲ သိကွမှာပါ နေျာ့။ တခါမှလဲ အပွဈမမွငျခဲ့ပါဘူး။ ကိုယျလဲ စြေးရောငျးနသေူပဲလေ ဟဲ ဟဲ သိတာပေါ့။
ခကျတာက တခြို့ ညဈညဈပါတျပါတျ online shop တှပေေါ့။ သူတို့တှကေိုယျ့ပုံကို ဖိုတိုတှရှေော့ကွပွီး ကွျောငွာကွတာ။ ဆထေ့ားတာတောငျ ပွနျမရှဲ ရဲပု။ ရှကျလို့။ တခြို့တှလေဲ မွငျဖူးကွမှာပေါ့။အဲ့တော့ နားလညျမှုလေးတှေ မလှဲစခေငျြ။ခဈြခွငျးကို မခှဲကွပါနဲ့။ရှဲ ရှဲပါလို့ (တရုတျလိုပွောခွငျး မဟုတျပါရှဲ သာ ရှဲပါလို့ကဲ ၊ မအေးသောငျး က ဒီလိုရှငျးထားတယျနျော ။ ရှဲ သာရှဲပါတယျ။ အားလုံးပဲ မအေးသောငျး ပုံလေးတှေ စိတျခလြကျခြ ရှဲ လို့ ရတယျနျော
Posted in သတင်း, အနုပညာရှင်Tagged အေးဝတ်ရည်သောင်း
၀တ်မှုံရွှေရည် ရဲ့ ၂၉ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ 